Sarkaal Muhiim ah oo ka tirsanaa Maamulka Jubba oo si xeeladeesan loo qaarijiyay iyo Maamulka oo faah faahin ka bixiyay – idalenews.com
Sarkaal Muhiim ah oo ka tirsanaa Maamulka Jubba oo si xeeladeesan loo qaarijiyay iyo Maamulka oo faah faahin ka bixiyay
Waxaa Shalay galinkii dambe Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose lagu qaarijiyay Sargaal sare oo katirsan Ciidanka Maamulka Jubba , kadib markii qarax si xeeladeesan loogu xiray gaarigiisa .
Sargaalka dhintay ayaa Magaciisa waxaa lagu sheegay Col. Maxamed Furinle, waxa uuna kamid ahaa Saraakiisha sar sare Amaanka Maamulka KMG ee Jubba u qaabilsan Magaalada Kismaayo.
Col. Maxamuud Qaalib oo ah Taliyaha ciidamada Maamulka Jubba ayaa xaqiijiyay qaraxa lagu dilay Sargaalkan katirsanaa Maamulkooda , waxa uuna sheegay in gaarigiisa loogu soo xiray qaraxa miino uu ku dhintay.
‘’Qaraxa waxa uu ahaa mid gaarigiisa loogu soo xiray sargaalka dhintay ,waxa uuna qaraxa ka dhacay xaafada Siinaay mee lisgoos ah xili uu marayay, waxaana qaraxa kaliya ku dhintay Furinle ,ilaaladiisa qaarkood ayaana dhaawacyo soo gaareen ‘’ ayuu yiri Col.Qaalib.
Sargaalkan shalay lagu dilay Magaalada Kisamaayo ayaa qeyb ka noqonaya saraakiil muhiim ah oo katirsanaa Maamulka Sheekh Axmed Madoobe oo siyaabo kala duwan lagu dilay Kismaayo.
Dhageyso: Wasiiru dowlaha Arrimaha Gudaha oo ka hadley Maamulka Seddexda Gobol ee Baar Bakiin looga dhawaaqey